Sidee naagta loo siigeysto. Baro sida loo bixiyo raaxada | Ragga Stylish
Fikradda ayaa ah mid aad u baahsan in ragga aysan aqoon sida dumarka looga raaxeysto galmada iyo inay yihiin kuwa daneystayaal ah oo leh kacsi haweenkuna ay ku harayaan rabitaankooda. Waa wax iska caadi ah in loo maleeyo in haweenku ay ka dhib badan yihiin maaddaama oo ay "badhanno badan ama fureyaal badan" ay ku leeyihiin halkaas oo ay adag tahay in la ogaado halka laga taabto. Ragga waa hawl fudud. Marka waligaa ha ka xanaaqin adigoo u maleynaya in haweenku si fiican u qabtaan, kaliya way ka sahlan yihiin. Si loo soo afjaro farqigaas abuuraya xumaanta u dhaxeysa labada jinsi, halkan waxaa ku imanaya buugga sida loo wasmada naagta.
Waan kuu sharixi doonaa wax walba, talaabo talaabo ah si aad si fiican ugu barato tabaha si aad haweeney uga dhigto inay si fudud ku gaarto galmada.
1 Taabashada haweeneydu waa hawl adag?
2 Sidee loo taabtaa kintirka
3 Sida loogu naago naagta hab sax ah
Taabashada haweeneydu waa hawl adag?
Dumarka oo dhami isku mid ma aha ama waa isku mid. Tan waa in la tixgeliyaa marka laga fekerayo in wax kasta oo halkan lagu sheego ay u adeegto mid kasta iyo haween kasta oo aad la seexato. Wax badan kama yarayn. Wixii haweeney u noqon karto barakada raaxada, mida kale waxay u arki kartaa caajis.
In kasta oo la rumaysan yahay in haweenku leeyihiin badhanno badan oo yar, waxay leeyihiin oo keliya mid ah, markaad taabato, waxaad samayn kartaa haweeney heer sare ah. Waxay ku saabsan tahay kintirka. Mararka qaar way adagtahay in laga fikiro waxa haweeneyda ay jeceshahay waqtigaas, laakiin kaliya waa arin ah ku celcelinta ogaanshaha halka la siinayo iyo ku celcelinta ku celcelinta ilaa aad ka hagaajiso farsamadaada.
Waa muhiim in la fahmo in anatomy-ka dumarka waa arrin jilicsan meelahaasna waxaa ku yaal xididdo badan oo neerfayaal ah. Taas macnaheedu waa in taabashada ugu yar ay sababi karto raaxo iyo xanuun labadaba. Kintirku wuxuu ku yaalaa gudaha xubinta taranka haweeneyda halkaasna ilaa marar badan inta lagu gudajiro gacmaha isla waa la kicin karaa. Waa xubin loogu talo galay raaxeysiga oo keliya oo cabirkeedu yahay 8 ilaa 10 cm.
Sidee loo taabtaa kintirka
Waxa aan u naqaano kintirka ilkaha kintirka oo kaliya sidii ay yihiin gus. Waa run in xubinta taranka oo dhan ay xasaasi u tahay salaaxida iyo taabashada, in kasta oo ay si gaar ah ugu qanacsan tahay dumarka haddii aagga loo saliidaynayo. Si tan ay u dhacdo, hordhaca ayaa lagama maarmaan ah. Markaynu kululaynayno xaalada, sifayntu waxay bilaabmaysaa inay soo baxdo oo way u fududahay inay dhacdo iyo inay naga caawiso inaan siino raaxo badan. Mararka qaarkood saliidani waxay qaadataa in yar ka dib soo bixitaankeeda. Waxay kuxirantahay kacsiga dumarka iyo hiddeheeda.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad kari karto, fartaada xoogaa u geli irridda siilka, ku shub saliidaha oo bilow inaad taabato kintirka. Haddii haweeneydu aysan si fiican u saliidaynin ama aadan rabin inaad sugto intay iyadu saliideyso, waxaad isticmaali kartaa jel la saliido ama candhuuftaada.
Si toos ah uma aadi kartid ilkaha kintirka illaa aad ka ogaato in faruuryaha waaweyn ee faruuryahooda ay kordheen. Haddii aad tan sameyso, waxay noqon kartaa wax laga xumaado haddii haweeneydu aysan si buuxda u kicin.
Dhaqdhaqaaqa ugu caansan waa in la dhigo tilmaamaha iyo farta dhexe kintirka dushiisa laguna sameeyo dhaqdhaqaaqyo qaab wareeg ah. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad farahaaga dhinac uga dhaqaaqdo oo aad u dhaqaajiso farahaaga kor iyo hoos si aad u abuurto khilaaf iyo in haweeneydu ay jeceshahay.
Hubso in aagga had iyo jeer la marmariyo xilli kasta, ama waxay kaa joojin doontaa inaad jeclaato inay kaa xanaajiso. Ujeeddadu waa in la ilaaliyo xiriirka indhaha ee lammaanaha si aad si fiican isku fahmi kartaan isla markaana kor ugu qaadi kartaan libido. Hubi si aad u ogaatid haddii waxa aad samaynaysid ay ka helaan iyada sida ay u beddesho qaabkeeda, sawaxanka, ama ay gebi ahaanba dabacsan tahay. Haddii haweeneydu kacsan tahay, wax kastoo aad sameyso, ma jeclaan doonto.
Waa sidaas dumar badan ayaa kacsada xiliga galmada. Tani way dhici kartaa sababtoo ah ma oga in ay raali ka yihiin ninka, maxaa yeelay waxay dareemaan xumaan naftooda ku saabsan jirkooda, way xishoodaan, iwm. Waxaa jira kun iyo kow sababood oo ah sababta dumarku uga walwalaan xilliga galmada una kacsan yihiin. Haddii tani dhacdo, ma awoodaan inay si fiican u kacsadaan. Haddii aad la joogto naag kacsan, waxaa fiican inaad lugta salaaxdo, caloosha ama dhunkato inta aad siigaysanayso.
Sida loogu naago naagta hab sax ah
Farahaaga ayaad kaga gudbi kartaa faruuryaha waaweyn ee waaweyn iyo kuwa yaryar si aad u hesho raaxo badan. Waxaad kala saari kartaa tusmada iyo faraha dhexe si aad ugu safarto gudaha kor ama hoos oo had iyo jeer si taxaddar leh u samee. Dibnaha aad bey u macaan yihiin oo waa inaad xoogaa riixdid oo aad riixdid.
Ha iloobin wax kasta oo aad ku aragto fiidiyowyada qaawan. Uma baahnid inaad kintirka taabatid ama aad gacmahaaga dhinac uga dhaqaaqdid sida aad u garaaceyso guitar. Xawaaraha aan ugu dhaqaaqno gacmaheena ayaa noqon kara mid xiiso leh, laakiin aan xoog la adeegsan. Markaan dardar galino xawaaraha aan ku taabano kintirkeeda waxaan kordhin doonnaa awooda aan ku sameyno adoon rabin.
Haweenka, tan oo kale waxay ka mid tahay riyooyinkii ugu xumaa sida aynaan u jeclaan doonin in si dhakhso leh oo adag loo kala jabiyo. Barta G waa meesha ugu fiican ee lagu bilaabo raaxada dumarka. Markay haweeneydu durba leedahay kacsanaan sare, waxaad farahaaga galin kartaa siilkeeda laakiin adigoon gebi ahaanba galin. Waa wax lagu farxo sida ay qabaan dumar badan. Sidaa awgeed, waxay dhahaan "caarada uun."
Waxaad ku bilaabi kartaa adoo gelinaya hal far oo keliya, haddii aad aragto siilka oo aad u ballaaran, kan kalena waad geli kartaa. Si toos ah u taabato si aad u tilmaamto G. Si aad u hesho, way u fududahay sida farahaaga oo kale, oo waxaad dareemaysaa lafaha miskaha. Waa halka ay tahay inaad taabato sidii inaad rabto inaad taabato xuddunta. Dhaqdhaqaaq ayaad u sameyn kartaa dhinac iyo dhinaca kale sida inaad iska xoqeysid dheriga xoogaa suugo ah.
Sidoo kale xoogaa xoogaa cadaadis ah ayaad ku mari kartaa aagga, laakiin ha iloobin inaad si taxaddar leh u sameyso. Xaqiiqda gelinta iyo soo bixida xubinta taranka haweeneyda farxad badan ugama keento dumarka (xitaa qaarkoodna waxbo ma siiso). Sidaas darteed, Had iyo jeer diirada saar kicinta xubinta taranka. Markaad ogaato inay kacsantahay, kordhi heerka masturiska waxaadna arki doontaa inay bilaabaneyso inay taahaan ama miskaha hoos u dhaqaajiyaan. Kani waa goormaad gaartid kacsiga.
Waxaan rajeynayaa in tilmaamahan ay kaa caawinayaan inaad ogaato sida naagta loo siigeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee naagta loo siigeysto
Sida loo isugu daro dharka iyadoo loo eegayo midabada